Waxaad xaq u leedahay meel degan oo aad ku shaqaynkarto
Waxaa xaq u leedahay in aad dareento amaan
Waxaad xaq u leedahay in aad hesho caawinaada aad u baahantahay
Waxaad xaq u leedahay in aad wax barato oo aad hormarto
Waxaad xaq u leedahay in aad ogaato waxa lagaaga baahanyahay si aad u hesho shahaadooyinka qaar
Waxaad xaq u leedahaay in aad codkaaga dhiibato
Waxaad xaq u leedahay in aad caafimaad qabto markaad iskoolka joogto
Waxaad xaq u leedahay in aad iskool aaddo
Taas waan kaa caawin karnaa
Waxaad nagu soo dacweyn kartaa anaga
Helena waa kormeere iskool
Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay meel degan oo aad ku shaqaynkarto
Hadii ay xisadu qasantahay waxaa kugu adkaan karta in aad barato wixi aad baranleheed. Dhamaan ardayda waxa ay xaq u leeyihiin in uu iskoolku yahay meel deganaansho iyo nagaasho leh.
Badi waxa aad ka baranaysid iskoolka waxaa lagu bartaa wada hadal. Waxaa kale oo muhiim ah in aad ardayda fasalka kala hadasho casharadiina. Laakiin dhamaan fasalka waxa ay kawada shaqaynayaan waxa uu macalinka u qorsheeyay. Marki ay ardayda taa samayn waayaan waaye marki ay xisadu qasmeyso. Markaas waxaa adiga dhib kugu noqonayo wixi aad baran leheed. Dhamaan ardayda waxay xaq u leeyihiin in ay cashiradooda uga shaqeeyaan xisada dhexdeeda.
Maxaa dhacaya hadii uu qof rabsho badan sameeyo?
Dhamaan ardayda waa in ay ku guulaysataa iskoolka. Saas darteed waxaa muhiim ah in uu macalinku isku dayo qaab uu wax u baro dhamaan ardayda fasalka. Hadii uu hal arday qasayo daganaanshaha ardayda kale wuxuu macalinku samayn karaa labo waxyaabood. Mid waa in uu macalinku isku dayo in uu caawiyo ardayga qasaya ardayda kale, si uu ula socdo waxbarashadiisa. Laakiin macalinku waa in uu xataa la socdaa ardayda kale waxbarashadooda. Saas darteed tan kale waxa ay tahay in uu bixiyo ardayga wax rabshaynaya. Macalinku wuxuu kale oo go aamin karaa in uu ardayga joogo iskoolka waqti dheeraad ah ama uu soo dhaqsado sii uu wixii dhaafay u dhigto. Tan waxa ay ku taalaa sharciga iskoolka waxayna khusaysaa iskoolaadka oo dhan.
Waa in uu qof kasta yaqaanaa nidaamka sharciga
Dhamaan iskoolaadka waa in uu jiraa nidaam sharci oo ay ardayda iyo dadka waaweyn wada jir kawada hadlan. Marki ay ardayda iyo dadka waaweyn ey kawada hadlaan sharciyada ay doonayaan, waxaa markaa go'aanka kama danbeynta ah iskaleh oo gaaraya maamulaha iskoolka oo sheegayo sharciyada lagu dhaqmi doona iskoolka. Sharciyada waxa ay dhigayaan waxa iskoola waafaqsan iyo waxyaabaha aan waafaqsanayn. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa in mobiilka lasoo baxsan karo xisada dhexdeeda ama in kale.
Waa muhiim in ay dhamaan dadka waaweyn iyo ardaydaba ay wada garanayan sharciyadaas- hadii kale laguma dhaqmi karo. Hadii xataa ay ardayda ka qaybqaadanaayaan sharciyada waxaa masuuliyada qaadaya macalimiinta iyo maamulka si sharciga loo waafajiyo manhajka iskoolka iyo sharciga iskoolka.
Masuuliyadee ku saaran adiga arday ahaan?
Dadka dhamaan way kala duwan yihiin, waxa aad adiga u aragto rabsho ayuu arday kalana u arki karaa daganaan. Dhamaan ardayda waa in ay raacaan nidaamka sharciyada sida ugu fiican iyaga dhexdoodana ay is tixgeliyaan. Hadii uu dagaal ka dhaco ardayda dhexdooda ayna xalin waayaan waa muhiim in ay qof weyn caawinaad weydiistaan.
Waxa aad iskoolka u aadaa in aad wax barato. Sidaas darteen waxaa masuuliyad kaasaarantahay in aad samayso casharada uu macalinku kuu diyaariyay. Hadii aad u aragto in ay casharadu wax faaiido ah aysan kuuleheyn waa in aad macalinkaaga u sheegtaa. Markaas macalinka ayaa kuu sharxi doona sababta ay muhiim u tahay ama laga yaaba in uu casharo kale oo adiga kugu haboon ku siiyo.
Hadii xataa ay qasantahay
Hadii ay kula tahay in ay qasantahay oo ay kugu adagtahay in aad isku taxalujiso waxaa la hadli kartaa macalinkaaga. Waxaa kale oo lahadli kartaa qof kale oo wayn oo iskoolka ka tirsan ama waxaad la hadli kartaa maalulaha.
Hadii aad u aragto in uusan maamulaha ku dhagaysanaynin waxaad la hadli kartaa qofka xakuma iskoolka, oo ah madaxa ka sareeya maamulaha. Waxaad caawinaad weydiisan kartaa waalidkaa ama qof kale oo weyn hadii aad dhib u aragto. Waxaad kale oo aad samayn kartaa in aad u dirto dacwad kormeerayaasha iskoolada, halkan ka aqriso wixii dheeraad ah:
Anaga waad nagu soo dacwayn kartaa